राशिफल बि सं २०७६ जेठ महिना - हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद)
Wednesday, 15 May 2019 07:51
राशिफल बि सं २०७६ जेठ महिना
जेठ महिना – जेठ महिना बुधबार संक्रान्ति परेको छ । समग्रमा हेर्दा यो महिना घिउ, तेल, तरकारी, फलफुल र सुनको भाउमा वृद्धि हुनेछ । सुती लगायत कपडाको भाउ भने घट्न सक्ने देखिन्छ । खाद्य पदार्थ को मुल्य सामान्य रहनेछ । जेठ महिनामा वर्षा कम हुनेछ भने गर्मी बढ्नाले जनजिवन कष्टकर बन्न सक्नेछ । आगजनी एवं सवारी दुर्घटनाका कारण चोटपटक को सम्भावना पनि देखिन्छ ।
यो महिना पर्ने मुख्य पर्व तथा दिनहरु
जेठ १ गते – वृष संक्रान्ति, मोहिनी एकादशी व्रत।
जेठ ३ गते – विश्व दुरसञ्चार दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस।
जेठ ४ गते – बुद्ध जयन्ती, चण्डी पूर्णीमा, उभौंली पर्व ।
जेठ ८ गते – अन्तराष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस
जेठ १५ गते – गणतन्त्र दिवस
जेठ १६ गते – अपरा एकादशी व्रत, चत्तधर हृदय जन्म जयन्ती
जेठ २० गते – सोमबारे औंसी, शनी जयन्ती
जेठ २२ – विश्व वातावरण दिवस
जेठ ३० गते – निर्जला एकादशी व्रत
सर्वप्रथम यो महिना रहने ग्रह गोचर बारे जानकारी लिऔं
यो महिना सुर्य बृष राशिमा, मंगल मिथुन राशिमा, राहु मिथुन राशिमा, केतु धनु राशिमा हुनेछन । बृहस्पति धनु राशिमा, बुध १९ गते सम्म वृष राशि र त्यसपछि मिथुन राशिमा र शुक्र २१ गते सम्म मेष राशिमा र वृष राशिमा गोचर गर्नेछन र शनि धनु राशिमा रहनेछन । ग्रहको यस्तो अवस्थाले विभिन्न राशिहरु लाई कस्तो असर पर्छ भनेर विष्लेषण गरि यो जेठ महिनाको मासिक राशिफल तयार गरिएको छ ।
मेष – (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)– मेष राशिका लागि जेठ महिना सबल रहनेछ । राशि स्वामी मंगल को गोचर तृतीय स्थानमा हुने हुनाले यो महिना तपाईको साहस तथा पराक्रम उच्च रहनेछ । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो जिद्धिपनका कारण दाजुभाई सँग भने विवाद पर्न सक्नेछ । बुध र सुर्यको गोचर धन स्थानमा हुने हुनाले यो महिना व्यापार व्यावसाय बाट राम्रो मुनाफा आर्जन हुने देखिन्छ । बिशेष गरि सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रको कारोबार बढि लाभदायक हुने देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श एवं न्याय क्षेत्रमा कार्य गर्ने महानुभावहरुका लागि पनि यो महिना आर्थीक रुपमा सबल रहनेछ । तपाईको बोलीमा प्रभावकारी साबित हुने देखिन्छ । नोकरी एवं राजनितिक क्षेत्रमा पनि यो महिना सफल रहनेछ । साथीभाई र इष्टमीत्र बाट पनि भरपुर साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । बैदेशिक यात्राको योग छ । पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ । आफ्नो जिवन साथी सँग बेला बेला मतभेद देखिन सक्नेछ । बिद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना शुभ रहनेछ । पञ्चम भावका स्वामी सुर्य धन स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले सन्तान पक्षबाट सुख प्राप्त हुनेछ। आर्थीक सहयोग समेत प्राप्त हुन सक्नेछ । यो महिना तपाईको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । आफ्नो प्रेमी सँग कुनै नयाँ ठाउँमा भ्रमणका लागि गएर रमाईला पलहरु बिताउन सक्नुहुनेछ । यस महिना खराब प्रभाव बाट बच्न भगवान सुर्यको पुजा आराधना गर्नु, गायत्री मन्त्रको जप गर्नु शुभ हुनेछ । तपाईका लागि यो महिना शुभ अंक ९, शुभ बार मंगलबार, शुभ रंग रातो र शुभ दिशा दक्षिण रहने छन ।
वृष ( ई, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो) – यो महिना राशि स्वामी शुक्र जेठ १९ गते सम्म व्यय स्थानमा र त्यसछि महिनाभर शिरमा रहनेछन । महिनाको मध्य भाग सम्म हेर्दा भोगविलास एवं मनोरञ्जन मा बढि धन खर्च हुन सक्नेछ । महिनाको मध्यभाग देखि भने आम्दानी र बचत दुबै बढ्न सक्ने देखिन्छ । बुध र सुर्यको गोचर पनि शिर मा हुने हुनाले व्यापार व्यावसाय तथा नोकरी सफल महिना रहनेछ । विशेष गरि फेशन तथा डिजायन सम्बन्धि बस्तु तथा सेवाको कारोबार बाट बढि लाभ हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा कामको अवसर प्राप्त हुनेछ । तपाईको सिर्जनात्मक क्षपता उच्च रहनेछ । सामाजिक कार्य बाट मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । सप्तम भावमा बृहस्पतिको गोचर रहने हुनाले जिवन साथी बाट हरेक सुख दुखमा साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । शनिको गोचर आठौं भावमा रहने हुनाले परिश्रम अनुसार सफलता हात नलाग्दा नैराश्यता बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य भने सफल रहनेछ । यो महिना प्रेम सम्बन्ध तनावपुर्ण बन्न सक्नेछ । मनमुटाव का कारण केहि समय बोलचाल समेत बन्द हुन सक्ने छ । आफ्नो बोली र व्यावहारमा संयमता अपनाउनु उत्तम हुनेछ ।सन्तानको पढाईको विषयमा पनि चिन्ता बढ्न सक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा भाईरल को प्रकोप ले समात्न सक्छ । यसले स्वास्थ्य अवस्थामा चुनौती दिन सक्नेछ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि दैनिक हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने वा पाठ ध्यानपुर्वक सुन्नु शुभ हुनेछ । यो महिना तपाईका लागि शुभ अंक १, शुभ बार आईतवार , शुभ दिशा पुर्व र शुभ रंग रातो रहेका छन ।
मिथुन (क, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – मिथुन राशिका लागि यो महिना राशि स्वामी बुध सुर्यका साथ व्यय स्थानमा रहनेछन । समग्रमा हेर्दा यो महिना तपाईका लागि मिश्रित हुने देखिन्छ । शुक्रको गोचर लाभ स्थानमा हुनाले व्यावसाय बाट उचित लाभ हुनेछ । श्रृङ्गार तथा बालबालीका संग सम्बन्धित बस्तु तथा सेवाको कारोबार बाट बढि लाभ हुने देखिन्छ । बुध र सुर्यको गोचर व्यय स्थानमा हुने हुनाले सरकारी निकाय संग सम्बन्धित काम बन्न ढिला हुन सक्नेछ । कुनै पनि कार्य सफल बनाउन बढि दौडधुप गर्नुपर्ने हुनाले चिन्ता बढ्न सक्नेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । उच्च अंक ल्याएर प्रतिस्पर्धि लाई जित्न सक्नुहुनेछ । शिरमा राहु मंगलको प्रभाव रहने हुनाले अरुबाट बढि अपजस खप्नुपर्ने हुनसक्छ । यसले शिर, सामान्य चोटपटक तथा रगत सम्बन्धि स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्नेछ । आर्थीक कारोबार का विषयमा परिवारका सदस्य विच मतभेद देखिन सक्नेछ । आफ्रनो जिवनसाथी बाट समेत तपाईको अपेक्षा अनुरुप सहयोग प्राप्त नहुन सक्छ । घरपरिवार एवं स्वयंको स्वास्थ्यमा कमीकमजोरी देखिन सक्नेछ । आफ्नो आहार बिहार मा ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रेम सम्बन्ध भने यो महिना सुमधुर रहनेछ । एक अर्काको सुखदुखमा साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । राम्रो मेलमिलाप हुने एवं उपाहारको आदान प्रदान समेत हुन सक्नेछ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि गौमाता को सेवा गर्नु उत्तम हुनेछ । यो महिना तपाईका लागि शुभ रंग खैरो र निलो, शुभ बार शनिबार, शुभ अंक ५ र शुभ दिशा पश्चिम रहनेछन ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो,डा, डि, डु, डे,डो)– कर्कट राशिका लागी यो महिना शुभ रहनेछ । यो महिना लाभ स्थानमा बुध र सुर्य को गोचर रहने हुनाले तपाईलाई यो महिना नोकरी तथा राजनितिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । पञ्चम भावमा बृहस्पतिको बलियो प्रभाव रहने हुनाले कुनैपनि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि मनमा जोस, जाँगर र उत्साह भने भरपुर हुनेछ । बौैद्धिक एवं सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा तपाईको मन जानेछ । विशेष गरि राजनितिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने महानुभाव हरुका लागि यो महिना सफल रहनेछ । कर्मचारी वर्गका लागि सहकर्मी साथी सँग उचित समन्वय हुनेछ भने कार्यस्थलको बातावरण रमाईलो हुनेछ । । अध्ययन कार्य पनि सफल रहनेछ । अध्ययनका लागि विदेश जान सक्ने योग छ । विशेष गरि राहु र मंगलको गोचर व्यय भावमा रहने हुनाले नशा सम्बन्धि समस्या तथा चोटपटक को सम्भावना देखिन्छ । यात्रा गर्दा विशेष सजगता अपनाउनु होला । कतिपय क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठ्नाले चिन्ता बढ्न सक्नेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ । यो महिना ग्रहको खराब प्रभाव बाट बच्न भगवान श्री गणेशको पुजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ । यो महिना यो महिना तपाँइका लागि शुभ अंक ३, शुभ बार विहीबार शुभ रंग पहेंलो र शुभ दिशा उत्तर रहनेछ ।
सिंह – मा, मि, मु,मे, मो, टा, टि, टु) – यो महिना राशि स्वामी सुर्य बुधका साथ दशम भावमा रहने हुनाले यो महिना तपाइका लागि प्रभावशाली रहने देखिन्छ । व्यापार व्यावसाय बाट प्रशस्त धन आर्जन हुने देखिन्छ । विशेष गरि गरगहना तथा फर्निचर सम्बन्धि बस्तु तथा सेवाको कारोबार बाट बढि लाभ हुनेछ। नोकरी गर्नेहरुका लागि पनि शुभ समय रहनेछ । सहकर्मी साथीबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । तपाईको जिम्मेवारी पना र काम प्रतिको लगावको उच्च पदस्थ पदाधिकारी बाट सराहना हुने देखिन्छ । तपाईको निर्णय लाई अरुले मान्ने अवस्था हुनेछ । आफ्नो जिवन साथी बाट पनि निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने छ । पढाइ आफुभन्दा उच्च स्तरको व्यक्तित्व सँग सहयोग लिनु उत्तम हुनेछ त्यसैगरि छोटा र महत्वपुर्ण याात्रहरु हुन सक्नेछन । यो महिना प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सकारात्मक रहनेछ । विद्यार्थी वर्गको पढाई का लागि सकारात्मक समय रहनेछ । यो महिना स्वास्थ्य अवस्था समग्रमा सबल रहनेछ यो महिना ग्रहको शुभ प्रभाव का लागि पिपल मा जल चढाउनु शुभ हुनेछ त्यसैगरि पिपलको फेदमा दियो बाल्नु पनि उत्तम हुनेछ । यो महिना तपाँईका लागि शुभ अंक १ , शुभ बार आईतबार, शुभ रंग रातो र शुभ दिशा पुर्व रहेका छन ।
कन्या ( टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)– यो महिना राशि स्वामी बुध सुर्य का साथ नवम भावमा गोचर गर्ने हुनाले समग्रमा यो महिना सकारात्मक रहने देखिन्छ । आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ । आफ्ना साथीभाई सँग को सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। यो महिना प्रेम तथा पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ । व्यापार व्यावसायमा वृद्धि हुनेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि यो महिना त्यति शुभ रहने देखिदैन विशेष गरि कार्यस्थलमा सहकर्मी साथीहरु बिच मनमुटाव बढ्न सक्नेछ । आफ्नो बोली र व्यावहारमा संयमता देखाउनु उत्तम हुनेछ । यो महिना तपाईको सिर्जनात्मक एवं अभिव्यक्ति क्षमतामा थप निखार आउनेछ । विशेष गरि सञ्चार क्षेत्र सँग सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त महिना रहेको छ । नयाँ सिर्जना, खोज तथा अनुसन्धानमुलक कार्यमा तपाईको संलग्नता हुनेछ । पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ । परिवारमा एक आपसमा सहयोग र सदभाव कायम रहनेछ । यो महिना प्रेम सम्बन्ध पनि सकारात्मक रहनेछ । विद्यार्थीको पढाईमा प्रगति हुनेछ । यो महिना तपाईका लागि शुभ अंक ६ शुभ रंग हरियो शुभ दिशा दक्षिण र शुभ बार सोमबार रहनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तु,ते) – तुला राशिका लागि यो महिना मिश्रित रहेको छ । राशि स्वामी शुक्रको गोचर सप्तम भावमा १९ गते सम्म गोचर हुनेछ । यो अवधिमा रमाईलो तथा मनोरञ्जनमा बढि समय र अर्थको खर्च हुन सक्नेछ । तर पनि आम्दानीका क्षेत्रहरु पनि यथावत रहने हुनाले ठुलो वित्तिय समस्या नहुन सक्छ । शाझेदारीका कार्यबाट मुनाफा आर्जन हुनेछ । बुध र सुर्यको गोचर भने अष्टम भावमा रहने हुनाले ईज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्नेछ । विशेष गरि १९ गते पछिको समयमा झुटा आरोप एवं विपरित लिंगी साथी बाट लाञ्छना लाग्न सक्नेछ । सचेत रहनु होला । आफ्नो जिवन साथी सँग भने सुमधुर सम्बन्ध रहने देखिन्छ । पनि तृतिय भावमा शनिको गोचर का कारण पराक्रम बलियो रहनेछ । यो महिना तपाईको बौद्धिक एवं सिर्जनात्मक क्षमता उच्च रहनेछ । आफ्ना माता पिता एवं परिवारका सदस्य बाट महत्वपुर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । तृतीय भावमा बृहस्पतिको गोचर रहनाले आफ्नो परिश्रम अनुसार नै सफलता प्राप्त हुने महिना रहेको छ । व्यापार व्यावसाय मा फाईदा बढ्नेछ । नोकरीमा भने मध्यम समय रहनेछ । कार्यस्थलमा सहकर्मी बिच मनमुटाव बढ्न सक्नेछ । सरकारी क्षेत्र सँग सम्बन्धित कार्यमा पनि ढिला सुस्ती हुन सक्नेछ । शैक्षिक क्षेत्र का व्यक्तिहरुका लागि यो महिना उत्तम रहेको छ । विद्यार्थीको पढाईमा महत्वपुर्ण सुधार हुनेछ । भाग्य स्थानमा मंगल र खराब युतीका कारण बुवाको स्वास्थ्य कमजोर हुन सक्नेछ । तपाँइका लागि यो महिना शुभ रंग सेतो, शुभ अंक ६ शुभ बार शुक्रबार र शुभ दिशा पश्चिम रहेका छन । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि देवीको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
बृश्चिक राशि –तो,ना,नी,नु,ने,नो,या,यी,यु) – बृश्चिक राशिका लागि यो महिना राशि स्वामी मंगल अष्टम भावमा राहुका साथ गोचर गर्नेछन । समग्रमा हेर्दा यो महिना तपाईका लागि मिश्रित रहने देखिन्छ । अप्ठ्यारा एवं चुनौतिपूर्ण कार्यहरु तपाईले पार लगाउनु पर्ने देखिन्छ । तर पनि सप्तम भावमा बुध र सुर्यको गोचर रहने हुनाले नोकरी तथा व्यावसायमा सकारात्मक समय रहनेछ । साझेदारीका कार्य बाट लाभ हुनेछ । राजनितिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा समेत तपाईको पहिचान थप मजबुत हुनेछ । राजनितिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि पद र प्रतिष्ठा बढ्ने योग छ । परिवार को स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्नेछ। धन स्थानमा बृहस्पतिको गोचर ले पनि उत्साहजनक महिनाको रुपमा देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । यो महिना नयाँ घर जग्गा किन्ने, सवारी साधन एवं अन्य अचल सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ । हरेक कार्यमा आत्मविश्वास उच्च रहनाले निर्णय क्षमता पनि बलियो हुने देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गनेहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा गएर सेवा गर्ने अवसर जुट्ने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापन कार्य सफल रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य रहनेछ । धन स्थानमा शनिको गोचर रहनाले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि शारिरिक रुपमा अशक्त एवं वृद्ध लाई सहयोग गर्नु उत्तम हुनेछ । तपाईका लागि यो महिना शुभ अंक ३, शुभ बार विहिबार शुभ दिशा पुर्व र शुभ रंग सुनौलो रहेका छन ।
धनु – ये,यो,भा,भि,भू,ध,फा,ढ,भे)– धनु राशिका लागि यो महिना शुभ रहेको छ । राशि स्वामी बृहस्पति को गोचर शिरमा रहने हुनाले ईज्जत प्रतिष्ठामा वृद्दि हुनेछ । तपाईका विरोधिहरु पराजित हुनेछन । पारिवारिक सहयोग र घरायसी वातावरण अनुकुल रहनाले मन प्रफुल्ल रहनेछ । बिशेष गरि सरकारी निकाय बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसायबाट उचित लाभ हुनेछ । अन्न तथा फर्निचर सँग सम्बन्धित बस्तु तथा सेवाको काराबार बाट बढि लाभ हुने देखिन्छ । पञ्चम भावमा शुक्र को गोचर रहने हुनाले सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । उनिहरुको बारेमा शुभ समाचार सुन्न पाईनेछ । विद्यार्थीको पढाईमा मन जानेछ । आफ्नो परिश्रम अनुसार अंक ल्याउन ग्रहले साथ दिनेछ । यो महिना प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । आफ्नो प्रेमी सँग रमाईला क्षण बिताउन सकिने योग छ । तर सप्तम भावमा राहु र मंगल को गाचरका कारण बैवाहिक सम्बन्ध भने तनावपुर्ण बन्न सक्नेछ । उच्च संवेग का कारण विवाद भएर शारिरिक तथा भावनात्मक दुरी बढ्न सक्नेछ । जिवनसाथीको स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिन सक्नेछ । जिम्मेवार भएर सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गर्नुहोला । तपाईका लागि स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा पेट तथा आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि हनुमान चालिसा पाठ गर्नु उत्तम हुनेछ । तपाईका लागि यो महिना शुभ अंक ३ शुभ बार बिहिबार शुभ रंग पर्हेलो र शुभ दिशा दक्षिण रहनेछन ।
मकर ( भो,जा,जी,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि)– मकर राशिका लागि यो महिना सबल रहेको छ । पञ्चम भावमा भावमा बुध र सुर्यको गोचर रहने हुनाले यो महिना तपाईको बौद्धिक क्षमता सबल रहनेछ । मान सम्मान मा वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा नयाँ क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाहरु सँग कारोबार हुनेछ । प्रेम तथा बैवाहिक जिवन सुमधुर रहनेछ । आफ्नो जिवनसाथीको हरेक कार्यमा साथ र सहयोग प्राप्त हुनाले मन हषर््िात हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्र मा ग्रहको शुभ प्रभाव रहनेछ । छैठौं भावमा राहु र मंगल को गोचर रहने हुनाले तपाइका प्रतिस्पर्धिहरु पछाडी पर्नेछन । तर तपाँइको मावली पक्षमा परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य अवस्था विग्रन सक्नेछ छ । तपाईको नेतृत्वमा कार्यालयका महत्वपुर्ण कार्यहरु सम्पन्न हुनेछन । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । सन्तान का विषयका शुभ समाचार सुन्न पाईनेछ । उनिहरुको सफलतामा खुशी हुने अवसर जुट्नेछ । यो महिना राजनितिक क्षेत्रमा समेत तपाई को प्रभाव बढ्नेछ । बाहौ भावमा शनिको प्रभाव रहने हुनाले धनमाल हराउन सक्नेछ । सचेत रहनुहोला । यो महिना प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । आफ्नो सुखदुखमा प्रेमीको साथ र सहयोग रहनेछ । स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा सामान्य चोटपटक एवं छालामा एलर्जी सम्बन्धि समस्या देखिन सक्नेछ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि आफ्ना इष्टमित्र एवं दाजुभाई लाई परेको बेला सहयोग गर्नु उत्तम हुनेछ । यो महिना तपाइका लागि शुभ अंक १, शुभ रंग गुलाबी , शुभ दिशा दक्षिण र शुभ बार सोमबार रहनेछ ।
कुम्भ – (गु,गे,गो,सा,सी,सु,से,सो,द,)– कुम्भ राशिका लागि यो महिना सबल रहनेछ । तृतीय स्थान मा बुध र सुर्यको गोचर रहने हुनाले यो महिना साहस तथा पराक्रम बढ्नेछ । मनमा जोस, जाँगर एवं उत्साह पनि भरपुर रहनेछ । आफ्ना दाजुभाई सँगको सरसल्लाह र सहयोग आदानप्रदान महत्वपुर्ण साबित हुन सक्नेछ । यो महिना सञ्चार सिप मा वृद्दि हुनेछ भने तपाईको बोलीको प्रशंसा हुनेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि शुभ समय रहनेछ। तपाईको कार्यको उच्च पदस्थ व्यक्तित्व बाट प्रशंसा हुनेछ । घरपरिवार बाट उचित साथ र सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा थप उत्साह थपिनेछ । बैदेशिक क्षेत्र सँग सम्बन्धित कारोबार बाट बढि लाभ हुनेछ । जस्तै निर्यात जन्य सामानहरु, म्यानपावर व्यावसाय, अनलाईन विजनेस बढि नाफा मुलक हुने देखिन्छन । राशि स्वामी लाभ स्थानमा हुनाले फलाम तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा बाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । घरमा मांगलिक कार्यहरु हुनेछन विद्यार्थी वर्गका लागि पनि शुभ महिना रहेको छ । आफ्नो परिश्रम अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन सक्नेछ । यो महिना गलत सँगतको प्रभावमा कुलत एवं दुव्र्यसनमा फस्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । साथी बनाउँदा विशेष सजगता अपनाउनुहोला । स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा समग्रमा ठिक रहनेछ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान श्री गणेशको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ । यो महिना तपाईका लागि शुभ अंक ४, शुभ रंग निलो र खैरो, शुभ बार विहिबार र शुभ दिशा पश्चिम रहनेछन ।
मिन (दी,दु,थ,झ,ञ,दे,दो,च,ची)– मिन राशिका लागि यो महिना मिश्रित रहनेछ । राशि स्वामी केतु र शनिका साथ दशम भावमा रहने हुनाले नोकरी तथा व्यापार व्यावसायमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । कार्य स्थलमा तपाईको कार्यको उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु बाट प्रशंसा हुनेछ । सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ । घरमा मांगलिक कार्यहरु को आयोजना हुन सक्नेछन । आफुभन्दा उच्च व्यक्तित्वहरुको सल्लाह र मार्गदर्शन अनुसार कार्य गर्नु भएमा प्रभावकारी हुनेछ । व्यापार व्यावसायका लागि शुभ महिना रहनेछ । यो महिना फेशन तथा श्रृंगार संग सम्बन्धित बस्तु तथा सेवाको कारोबार बाट बढि लाभ हुने देखिन्छ । त्यसैगरि बिदेश यात्रमा जान चाहानेहरुका लागि शुभ समय छ । सन्तानबाट सुख प्राप्त हुनेछ । चतुर्थ भावमा राहुको प्रभाव रहनाले पारिवारिक समस्याका कारण चिन्ता बढ्न सक्नेछ । बिशेगष गरि आमाको स्वास्थ्यमा गिरावट आउन सक्नेछ । विद्यार्थीको पढाईका लागि सकारात्मक समय रहनेछ । यो महिना तपाईको प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ । आफ्नो जिवनसाथी सँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ । स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा तपाईलाई पेट तथा छाती सम्बन्धि समस्या देखिन सक्नेछ । आफ्नो आहार विहार मा विशेष ध्यान दिनु उत्तम हुनेछ । यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि आफ्ना कुल पित्रिहरुको आराधना गर्नु शुभ हुनेछ । यो महिना तपाईका लागि शुभ अंक ३, शुभ बार विहिबार, शुभ रंग पर्हेंलो, शुभ दिशा उत्तर र पुर्व हुनेछ ।
More in this category: « साप्ताहिक राशिफल- हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद)	वास्तु अनुसार कस्तो हुनुपर्छ त हाम्रो भान्साकोठा ? ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) »